Izimbongi Corner country retreat - I-Airbnb
Izimbongi Corner country retreat
Kenninghall, England, i-United Kingdom
I-Poet's Corner iyindlu yokulala ethokomele emibili egcwele ubuhle nomlingiswa, esendaweni ethule yase-Kenninghall eNorfolk. Ikhaya langaphambili lembongi kanye nombhali u-Oliver Bernard, leli kotishi selivuselelwe ngokuzwela nangothando kwavezwa izici eziningi zoqobo.
Noma ngabe ufuna impelasonto yothando yokubaleka noma indawo ongavakashela kuyo i-East Anglia enhle, leli kotishi likulungele. Siyilungele inja, ngakho-ke sazise uma uletha i-pooch eyodwa eziphethe kahle.
Sathandana nekotishi siqala ukulibona futhi ukulungiswa kube umsebenzi weqiniso wothando. Silinganisela ukuthi leli kotishi lalizokwakhiwa ekuqaleni ngekhulu le-16 elinesitezi esiphezulu futhi langemuva lengezwe maphakathi nekhulu le-17. Izivakashi zinendlu yonke nengadi yazo, ngakho-ke indawo ifanele imibhangqwana, abangani, imindeni emincane noma labo abafuna indawo ethule yemisebenzi yabo yokudala. Isitezi esiphansi sinendawo yokuhlala enohlelo oluvulekile enezinkuni, igumbi lokugezela elineshawa kanye nekhishi elihlangene ongakwazi ukungena ngalo engadini yangasese ebiyelwe.
Izitebhisi eziphakeme neziwumngcingo eziholela ekamelweni elikhulu elinombhede ophindwe kabili, futhi ngemuva kwawo, ngomnyango wamakhethini, kunekamelo lesibili, elingase libe nombhede owodwa noma emibili kuye ngobukhulu bomndeni wakho. Sicela uqaphele ukuthi ayikho iminyango esitezi esiphezulu futhi singathanda ukuthi izinja zihlale phansi ngesikhathi sokuhlala kwakho.
I-Kenninghall iyidolobhana elihle elinomlando elinendawo yokucima ukoma yamagugu kanye nesitolo sedolobhana eduze. Hamba uye engadini yomphakathi kanye neMillennium Woods noma uphumule engadini ebiyelwe. Ungase ubambe ngisho nomjaho webhokisi lensipho waminyaka yonke! I-Kenninghall iseduze nomngcele weNorfolk / Suffolk futhi uma uqhubeka kancane ungahlola iNorth Norfolk Coast emangalisayo, iNorwich, iBury St Edmunds kanye neLavenham yomlando.
I moved to rural Suffolk from London in 2016 with my husband, daughter and our beagles. Since then I have collected a menagerie of animals from Polish crested chicken to Miniature…
Uzosebenzisa ukuzihlola wena ngokwakho, kodwa sihlala endaweni okufinyeleleka kalula kuyo i-Cottage futhi singaba khona uma kukhona izinkinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Kenninghall namaphethelo